April 2019 - Nanmalgyi
ပရိသတ်အချို့တောင် အထင်မှားနိုင်တဲ့ Game of Thrones ထဲက ယုံတမ်းစကားများ
April 30, 2019 Yuki 0
ကမ္ဘာ့ရုပ်သံစီးရီးတွေရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုအားကို လုံးလုံးလျားလျားပြောင်းလဲပေးခဲ့တဲ့ Game of Thrones စီးရီးဟာ အဆုံးသတ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစီးရီးထဲမှာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့လို့ ပရိသတ်တွေ အထင်လွဲစရာ ဖြစ်နေမယ့် အချက်တစ်ချို့ကို ပြောချင်လွန်းလို့က ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ ၁. Targaryen တွေဟာ မီးမကြောက်ဘူး ပထမဆုံး Season ရဲ့အထင်ကြီးစရာအကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုက နဂါးမယ်တော် […]
ကမ္ဘာ့ MMA Award ဆုပေးပွဲမှာ အောင်လအန်ဆန်အတွက် မဲပေးနိုင်ပြီ
ပြောချင်လွန်းလုိ့တို့ရဲ့ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် MMA ဖိုက်တာ အားကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အောင်လအန်ဆန်ဟာ မနေ့က သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆိုရှယ်စာမျက်နှာကနေတဆင့် မြန်မာပရိသတ်တွေကို အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဘာအတွက်လဲ ဆိုရင်တော့ မကြာခင်မှာ ချီးမြှင့်သွားမယ့် World MMA Awards ဆုပေးပွဲမှာ သူ့ကို စကာတင်စာရင်းအဖြစ် ထည့်သွင်းထားပြီး မြန်မာပြည်က ပရိသတ်တွေဟာ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် အောင်လကို […]
သီချင်းတိုက်နေရင်း အသည်းယားအောင် ကပြလိုက်တဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်
မြန်မာအိုင်ဒေါလ် ပြိုင်ပွဲကနေတဆင့် လူသိများလာပြီး ပရိသတ်အခိုင်အမာ ရရှိလာတဲ့ အဆိုတော် ဖြိုးမြတ်အောင်ကတော့ လက်ရှိမှာဆိုရင် သူ့အောင်မြင်မှုကတော့ ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် အောင်မြင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြိုးမြတ်အောင်ကတော့ သူ့ရဲ့ ဆိုလိုအယ်လ်ဘမ်မထွက်သေးတာတောင် တော်တော်လေးကို အောင်မြင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြိုးမြတ်အောင်ကတော့ သူအောင်မြင်သွားတဲ့ အချိန်မှာလည်း အလှူအတန်းတွေ အများကြီးလုပ်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်အချစ်ကို ရယူနိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ […]
အမျိုးတော်နေမှန်း အများမသိတဲ့ ဆယ်လီများ
ဆယ်လီတွေမှာ ထင်ရှားတဲ့ နေထိုင်မှုဘဝရှိပြီး သူတို့ရဲ့ ဘဝအစိတ်အပိုင်းတော်တော်များများကို ပရိသတ်တွေက သိတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၁၂ ဝမ်းကွဲတော်စပ်တဲ့ မျိုးရိုးကိုတော့ အမာခံပရိသတ် တွေလည်း လက်လမ်းမှီမယ် မထင်ပါဘူး။ ပြောချင်လွန်းလို့က ဒီတစ်ခါတော့ အမျိုးတော်နေမှန်း လူသိပ်မသိတဲ့ ဆယ်လီတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁. Justin Bieber […]
လူကို သုခဘုံ​ပေါ်ပို့​ပေးမယ့်​ ​ကမ္ဘာ့အဆန်းသစ်​ဆုံး ဇိမ်​ခံအိပ်​ယာများ
ဇိမ်​နဲ့အိပ်​ရတာ သိပ်​ကြိုက်​တဲ့သူ​တွေအတွက်​ အခုအိပ်​ယာ​တွေက သိပ်​ပြီးကို စပါယ်​ရှယ်​ဆန်​လွန်းပါတယ်​။ ကြိုက်​သ​လောက်​အိပ်​၊ ကြိုက်​သ​လောက်​​မွေ့၊ ကြိုက်​သ​လောက်​နှပ်​၊ ကြိုက်​သ​လောက်​​ကွေးရုံပါပဲ​လေ။ ​နောက်​ဆုံး​ပေါ်နည်းပညာမြင့်​​တွေနဲ့ ​တော်​​တော်​ကြီးကိုဆန်းသစ်​ထားတာမို့ ကိုယ်​အကြိုက်​ဆုံးအိပ်​ယာ​လေး​တွေကို ​ရွေးချယ်​ ကြည့်​ကြပါဦး။ တစ်​ကိုယ်​​ရေ​လေး ခပ်​​အေး​အေး​ပဲ ​နေချင်​တယ်​ဆို သိပ်​​ကောင်းတဲ့ အိပ်​ယာ​လေး​ပေါ့။ အိပ်​ယာထဲ ​ချော့သိပ်​​ပေး​နေသလို တုန်​ခါမှုတုံ့ပြန်​ခံစားမှု​လေး​တွေပါဝင်​ပြီး တကယ့်​ကိုငြိမ့်​ငြိမ့်​​လေးပါ။ စိတ်​ခံစားမှု အလိုက်​ […]
အူစိန်​​ဘော့လက်​သစ်​ ဖြစ်​လာ​တော့မယ့်​ ကမ္ဘာ့အ​ပြေးအမြန်​ဆုံး က​လေး​ငယ်​
မီတာ ၁၀၀ တာတိုအ​ပြေးကို ၁၃.၄၈ စက္ကန့်​နဲ့ပန်းဝင်​ခဲ့သူက အသက်​ ၇ နှစ်​အရွယ်​ က​လေးငယ်​​လေး ရူး​ဒေါ့ဖ်​ဘလိတ်​အင်​ဂရမ်​ ပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်​အတွင်းကဖြစ်​ပါတယ်​။ အသက်​အရွယ်​ မ​ရွေး မီတာ ၁၀၀ တာတိုအ​ပြေးမှာ ကမ္ဘာ့ အမြန်​ဆုံးစံချိန်​တင်​ထားခဲ့သူက အားလုံးရဲ့အချစ်​​တော်​ အူစိန်​​ဘော့ပါပဲ။ ဒါ​ကြောင့်​ ဘလိတ်​​လေးဟာ အူစိန်​​ဘော့လက်​သစ်​ဖြစ်​လာဖို့် အ​မျှော်​လင့်​ကြီး​မျှော်​လင့်​ခံ​နေရပြီး […]
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ Selena အကြောင်းတွေလိုက်ရှာဖတ်နေတဲ့ Justin Bieber
ဲJustin Bieber ကတော့ ရှင်းရခက်တဲ့ပြဿနာကြီးကိုဖန်တီးလိုက်ပြန်ပါပြီ။ Justin ဟာ သူ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းက ဆယ်နှစ်ကျော်ချစ်လာတဲ့ Selena Gomez နဲ့ လမ်းခွဲပြီး Hailey နဲ့ ယူလိုက်ပေမယ့် ပြဿနာတွေအားလုံးဟာ ပြီးသွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တမ်းတော့ ပြဿနာတွေက အဲဒီကမှစတာလို့ဆိုရမှာပါ။ Justin နဲ့ Hailey ဟာ […]
ကမ္ဘာ့ရာသီဥတု​ဖောက်​ပြန်​မှု​ကြောင့်​ ပျောက်ကွယ်သွားမယ့် အစားအစာတွေ
ဒီ​မေးခွန်း​နောက်​မှာ ​ဂေဟစနစ်​ပျက်​စီးလာပုံက အဖက်​ဖက်​ကို ထိခိုက်​​စေတယ်​ဆိုတာ ငြင်းပယ်​လို့မရတဲ့ခါးသီးအမှန်​တရားပါပဲ။ အခုချိန်​မှာ လွယ်​လွယ်​ကူကူ နဲ့ အရသာရှိရှိ ၊ ပုံမှန်​​ဈေးနှုန်းနဲ့ စား​သောက်​နိုင်​​နေတဲ့အစားအ​သောက်ေ​တွဟာ ​နောင်​လာမယ့်​အနာဂတ်​မှာ ရှားပါးစာ​သောက်​ကုန်​​တွေဖြစ်​လာပြီး ပိုက်​ဆံတတ်​နိုင်​တဲ့ လူကုံထံ​တွေမှ ​ဈေးကြီး​ပေး​စား​သောက်​နိုင်​မယ့်​အလားအလာ​တွေဖြစ်​လာပါ​တော့မယ်​။ ကမ္ဘာ့ရာသီဥတု​ဖောက်​ပြန်​မှု​ကြောင့်​ ဘယ်​လိုအစားအစာ​တွေ ​ပျောက်​ကွယ်​သွားဖို့ရှိ​နေလဲဆို ကြည့်​ကြရ​အောင်​လား။ ပျားရည်​ ကမ္ဘာ​မြေ ပူ​နွေးလာတာကတစ်​​ကြောင်း၊ ကာဗွန်​ဒိုင်​​အောက်​ဆိုဒ်​အ​ငွေ့​တွေရဲ့ […]
အခုတလော Facebook မှာ နာမည်ကြီးနေတာကတော့ လူတိုင်းလိုလို ပါးစပ်ဖျားထဲမှာ စွဲနေတဲ့ မဟူရာရုပ်ရှင်ရုံ ဆိုတဲ့ သရဲဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ သရဲကားဆိုပေမယ့် ဒီဇာတ်ကားကြီးထဲမှာတော့ နေတိုး၊ကျော်ကျော်ဗိုလ် ၊ မင်းသွေး ၊ နန်းစုဦးနဲ့ အတူ အိန္ဒိယ မင်းသမီးတစ်ယောက်ပါ ပါဝင်အားဖြည့်သရုပ်ဆောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ကောင်းများစွာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တဲ့အပြင် ရိုက်ကွင်းအနေအထား […]
ချစ်သူနဲ့ သမီးရည်းစားလိုထက်သူငယ်ချင်းလိုပေါင်းတယ်ဆိုတဲ့ သဇင်နွယ်ဝင်း
သဇင်နွယ်ဝင်းဟာဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကတည်းက MRTV4ရဲ့ presenter အနေနဲ့ လူသိများထင်ရှားလာခဲ့ပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့အမူအရာလေးတွေနဲ့ အရုပ်ကလေးလိုချောမောလှပတဲ့မျက်နှာလေးအပြင် သွက်လက်တက်ကြွတဲ့ကိုယ်နေဟန်ထားလေးကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ နှလုံးသားကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်တဲ့ မင်းသမီးလေးတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ သဇင်နွယ်ဝင်းက မကြာသေးမီက 8days TV နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ လက်ရှိအနုပညာလှုပ်ရှားမှုလေးတွေအကြောင်းနဲ့ အချစ်ရေးအကြောင်းကို ဖွင့်ဟပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ သဇင်က သင်္ကြန်ဖြတ်သန်းခဲ့ပုံလေးကို “သဇင် သင်္ကြန်လေးရက်လုံး […]